Tirooyinka Arrinka | Martech Zone
Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Sabtida, Oktoobar 29, 2011 Douglas Karr
Waxaan maqlay dadka baraha bulshada aad looga ixtiraamo oo leh, “dhag ha u dhigin tirada dadka raacsan aad leedahay. ” iyo “dhib malahan meeqa taageerayaal aad leedahay ”. Way qaldan yihiin. Haddii aysan macno lahayn, ma xisaabin lahayn iyaga. Anaga wax walba tiri… Qof walbana waxaan ku xukumaynaa lambarada aan aragno. Aan sharaxo.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira dib u dhac ku yimaada Klout iyo isbedelka algorithm ee ay sameeyeen. Habka saamaynta lahaanshaha saamaynta lahaanshuhu wuu is beddelay oo dhibcaha Klout ee dadku hoos ayey u dhaceen - badankoodna waxay ahaayeen illaa 10 dhibcood, in badan oo ka mid ahna waxay hoos ugu dhaceen ilaa 20 dhibcood. Klout waxay difaaceysaa tallaabada adoo siinaya jawaab celin ah in isbeddelada algorithm ee cusub ay muujinayaan tilmaam sax ah oo ku saabsan saameynta internetka ee qof.
Dadku dan kama laha saxnaanta. Waxay daryeelaan lambarada.
Shaki iigama jiro taas Ujeeddooyinka Klout wey fiicnaayeen. Hoos udhaca dhibcaha Klout usbuucii hore ee 71 ilaa dhibcaha Klout ee 61 usbuucaan farsamo ahaan macnaheedu waa waxba maaddaama nambarka laftiisu si fudud u yahay qiyaas ku habboon.
Xaqiiqda, in kastoo, ay tahay in tirada lambarradu ay tahay wax muhiim u ahaa dad badan si ay u qaddariyaan saamayntooda iyo isdhexgalka khadka tooska ah. Haduu Klout hagaajin lahaa algorithm qanjaruufo waqti dhowr bilood ah, waxay u badan tahay inaysan helin diidmada. Laakiin haddii aan isku waafajiyo dadaalkayga qof la mid ah dhibcihiisuna ay joogto yihiin laakiin tayda ayaa hoos u dhacday… muuqaalka kore ee tayada nidaamka su’aal baa ku jirta. Taasi waa waxa dhacay… iyo Klout wuxuu hadda isku dayayaa inuu banaanka soo dhigo.
Fikradayda, Klout ayaa ka fiicnaan laheyd inuu si fudud u kordhiyo miisaanka halkii uu ka yareyn lahaa dhibcaha. Haddii cabirku horey u ahaan jiray 100, waxay ahayd inay si fudud ugu kordhiyaan oo ay gaaraan 115. Isbedelku wuxuu ka dhigi lahaa isbedelka dadka dhibcaha Klout mid aan qiimo lahayn. Waxaan rajeynayaa inay tani qarxeyso, wali waxaan taageere u yahay waxa Klout uu isku dayayo inuu gaaro (in kasta oo aan wali u maleynayo inay tahay dhibco qeyb ah maadaama aysan tixgelin raadinta ama tirooyinka taraafikada).
Lambarada waa muhiim
Haddii aadan rumaysnayn in tirooyinku muhiim yihiin, adigu waad iska kaftami doontaa. Marar badan, waxaan leenahay macaamiil leh 0 taageerayaal, 0 raacayaal ah, 0 retweets, 0 aragtiyo, 0 jecel, iwm Mid ka mid ah macaamiishayada dhawaantaan lahaa fiidiyoow cajaa'ib leh oo khadka tooska ah laga duubay oo si xirfadaysan loo duubay oo la siiyay bandhig aad u qabow oo ku saabsan badeecadooda. Dhibaatadu waxay ahayd in ay jireen ilaa 11 aragtiyood oo fiidiyowga ah.
Dad aad u tiro yar ayaa waqtiga u qaata inay daawadaan muuqaal 11 aragti leh.
Marka, waxaan sameynay waxa dadka kale ugu yeeri doonaan caytamaya. Dhawr bilood ka dib iyo dhawr boqol oo aragtiyood ah, ayaan u baxay oo iibsaday 10,000 oo muuqaal iyo 1,000 jecel yahay adeeg ka yimid. Ma ahan sharci darro mana jabineyso qof shuruudaha adeegga. Waxay u dhawaaqdaa har, in kastoo. 2 toddobaad gudahood, waxay u wareejisay fiidiyowga Youtube illaa 10,000 oo muuqaal ah. Toddobaad ka dib iyo fiidiyowga ayaa hadda fadhiya in ka badan 12,000 oo aragti iyo dhowr dersin oo kale oo jecel. Fiidiyow isku mid ah, isla mawduuc ah, oo hadda ku daraya aragtida 2,000 usbuucii halkii ay ka ahaan lahaayeen daraasiin.
Dadka Waxaa Saameeya Tirooyinka
Shakhsiyaadka leh ~ 50,000 kuwa raacsan waxay ku dari karaan 50 taageerayaal maalintii Twitter. Qofka ku cusub Twitter-ka, ku darista 50 taageerayaal bil gudaheed waa wax weyn… laakiin taasi si fudud uma dhaceyso. Waxba igama gelin sida cajiibka ah ee ay ka kooban yihiin… kororka celceliska isticmaalaha Twitter wuxuu ahaan doonaa saami ahaan ilaa hadda soo socota. Haddii ay doonayaan inay dardar geliyaan koritaankooda, waxay u baahan yihiin inay tiradooda kor u kacaan. Mar labaad, nadiifiyayaashu waxay ku doodi doonaan iibsashada kuwa raacsan inay tahay laga cabsado. Taasi waa u fududahay iyaga inay dhahaan markay haystaan ​​kumanaan kun oo taageerayaal horeyba ah.
Lambaradu Ha Kordhin
Dhibaatada tirooyinka ayaa ah inaysan had iyo jeer wax isku darin. Waxaan jeclahay tusaalaha hoos ku qoran… kootada autofollow on Twitter. Kaliya maahan inay leedahay dhibco saameyn iga badan aniga, waxay sidoo kale saameyn ku leedahay Klout lafteeda (si la yaab leh, waxay sidoo kale saameyn ku leedahay shaqada iyo suuqa saamiyada).
Caannimada Blogging iyo Nambarada
Khaladaadka tirooyinka waa fududahay. Waxaan xasuustaa markii heerka dahabka ee caan ka noqoshada balooggu uu ahaa tiradaada Feedburner ee macaamiisha. Gmail ayaa goobta timid oo dadka u ogolaatay inay cinwaanno emayl ah leeyihiin oo cinwaankiisu yahay faallo. Tusaale ahaan, haddii cinwaanka iimeylkeygu yahay name@domain.com, waan isticmaali karaa magaca+1@domain.com, magac+2@domain.com, magac+3@domain.com, iwm. Qaar ka mid ah dadka wax qora ee internetka wax ku qora ayaa si fudud u qoray qoraallo si ay ugu qoraan tobanaan kun oo macaamiil emailkooda Feedburner.
Natiijada? Baloogyadooda ayaa ku soo kordhay caan ka mid ah habeenkii. Qaar iyaga ka mid ah xitaa waxay awoodeen inay iibiyaan xayeysiinta iyo kafaalaqaadyada iyada oo ku saleysan tirooyinka la kordhiyay. Imtixaan ahaan, waxaan ku iibsaday boostada barta mid ka mid ah baloogyada waxaanan ka helay dhawr boqol oo jawaabood oo ka baxsan boqolaal kun oo macaamiil ah oo blog ah. Waxay xaqiijisay tuhunkayga. Waxay sii kordhiyeen tiradooda.
Sannado ka dib, balooggeygu wali wuu ku sii kordhayaa caan iyo akhris. Waxay noqotay baloog caan ku ah halbeegyada qof walba. Laakiin blog baloogyadaas khiyaamay wali waa iga horeeyaan inta badan boggaga kala sareynta. Waxay haysteen nuxurka kaydinta koritaanka, sidaa darteed si wanaagsan ayey u sameeyeen. Miyaan ka qoomameynin qish sidii ay yeeleen Dhab ahaantii, haa. Waan ka qoomameynayaa. Waxay ahayd inaan ka faaiidaysto fursadahaas markay soo baxeen.
Waad iibsan kartaa lambar kasta
Waxaad iibsan kartaa wax kasta. Raacayaasha, Taageerayaasha, Retweets, Likes, Muuqaalka Bogagga, Muuqaalka Youtube, Youtube-ka… Waxaa jira adeegyo dhammaan shabakadda. Waxaan tijaabiyey tan tan nidaamyadan qaarkoodna way ka fiican yihiin kuwa kale. Su'aasha, feker ahaanteyda, miyaanay kuwani anshax ahaan sax ahayn iyo inkale… su'aashu waa mid maalgashi. Karaa lambarrada iibsashada dhab ahaantii kordhinta muuqaalka iyo caannimada alaabadaada ama adeegyadaada internetka? Mararka qaarkood… waxay ku tiirsan tahay haddii waxa kor u qaadidaadu hanto!
Waxaan hayaa asxaabteyda oo ka argagaxsan in aan lacag ku bixiyay adeegyadan, laakiin todobaad ka dib waxay i weydiinayaan in aan dhiirrigeliyo dhacdo ama wax soo saar ay leeyihiin. Waa wax qurux badan oo xiiso leh… waxay u maleynayaan inay si uun anshax ahaan ugu qaldan tahay laakiin markaa ay gaarayaan markay ka faa'iideystaan.
Miyaad Iibsataa Tirooyin?
Ma aaminsani taas lambarrada iibsashada waa khalad… waa maalgashi suuq geyn ah sida wax kasta oo kale. Arrintu waxay tahay inaad awood u yeelan doonto ama aadan awood u yeelan doonin inaad ka faa'iideysato maal-gashigaas isla markaana aad siiso waxyaabaha ay awoodaan inay ku koraan soo socda Hadaadan sameynin, waad lumisay lacagtii. Dhib ma leh, wax xumaan ah oo loo geysto qofna… aan ka ahayn jeebkaaga.
Fiiro gaar ah: Waxaan aaminsanahay inay tahay khiyaano inaad iibiso xayeysiinta ku saleysan lambarrada aad ogtahay inaysan dhab ahayn.
Dad badan ayaa si adag iigu diidi doona mowduucan. Waa maxay xayeysiinta iyo suuqgeynta xudunta u ah? Haddii wax walba ay ku tiirsan yihiin koritaanka dabiiciga, dhammaanteen waan ka maqnaan lahayn shaqada warshadaha suuqgeynta.
Miyaan faragalinayaa caannimada iyo dhaqanka macaamilka haddii aan iibso taageerayaal? Haa!
Miyaan wax ka qabanayaa sumcadda markaan shaqaaleeyo naqshadeeye xirfadle ah si aan u horumariyo sumad si ay ugu muuqato inay tahay shirkad aad uga ballaaran sida ay tahay? Haa!
Suuqgeyntu waxay ku saabsan tahay horumarinta sawirka madaxa rajada ay u baahan yihiin adeeggaaga. Suuqgeyntu sidoo kale waxay ku saabsan tahay ka faa'iideysiga dabeecadaha macaamiisha si loo kordhiyo natiijooyinka ganacsiga. Ma caawin karo in dadka intiisa badani aysan dhag u dhigin tiro yar… Laakiin waan beddeli karaa lambarrada si ay fiiro gaar ah u yeeshaan!
Suuqgeyntu waxay dadka gelisaa albaabkaaga. Waa masuuliyadaada inaad dejiso rajooyinka oo aad dhaafi karto macaamiishaada. Haddii suuqgeyntaadu dejiso waxyaalo laga filan karo ma haysan kartid, markaa waad been sheegaysaa waana khalad. Laakiin haddii aad iibsato farabadan aragtida Youtube, fiidiyowgaaga ayaa ku faafaya, waxaadna ka iibinaysaa tan wax soo saar macaamiisha faraxsan sababtaas darteed, waxay ahayd maalgashi suuqgeyn weyn.
Maalgashigeena adeegyadan waa naadir. Kaliya waa marka aan la shaqeyneyno qof, wax soo saar ama adeeg aan ognahay inay si fiican u shaqeyn doonaan inaan maalgashi sameyno. Ama markaan la shaqeyneyno macmiil u baahan in si dhakhso leh looga helo dalacsiinta dhulka. Xaaladaha oo dhan, sida caadiga ah waxaan adeegsiga u adeegsannaa sidii tallaabo loo qaado si ay u koraan. Marka ay koraan, looma baahna in la sii wado.
Waad la yaabi doontaa sida wanaagsan ee ay u shaqeyso - waxaan kugu dhiiri galin lahaa inaad adigu tijaabiso… iibso 5,000 ee wax oo daawo sida ay u dedejiso koritaanka.
Amniga Facebook ee Facebook!
Xayeysiinta Nokia… Windows Phone Xiga
Oktoobar 29, 2011 at 8:13 PM
Aad u qancin. Laakiin sidee ku saabsan iibsashada dib u eegista 5-xiddig?
Oktoobar 29, 2011 at 10:36 PM
Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in xirmooyin badan oo dib-u-eegis ah ay bixiyaan dib u eegis saamiyadeed isla markiiba. Dhiirrigelintayda kore waa si fudud inaan shirkad u gaadho heer ay dadwaynaha guud la wareegi karaan. Waxaan ku dari lahaa intaas maahan taatikadayada kaliya. Waxay la mid yihiin dhiirrigelintaas, dhab ahaantii waxaan sameyneynaa dhiirrigelin dhab ah - waxaan weydiisaneynaa kuwa wax saameyn ku leh inay dib u eegis ku sameeyaan alaabta. Ma siineyno lacag si ay u been sheegaan… dhab ahaan waxaan siineynaa sheyga oo waxaan u oggolaaneynaa inay jajabku ku dhacaan meeshii ay doonaan. Waxaan aaminsanahay in dib-u-eegista badeecaddu ay tahay wax ka badan oggolaansho marka loo eego "lambar" fudud.
Waxaan ku dari lahaa, sidoo kale, in dadka badankood aysan sifiican uga jawaabin dib u eegista 5-xidig. Waxaan joogay shir sanado ka hor halkaas oo soosaarayaasha waxsoosaarka ay sheegeen in tirooyin aad u tiro badan oo ah dib u eegista 5-xiddig ay dhab ahaan hoos u dhigeen iibka. Dadku waxay iibsadeen alaabooyin ka badan 4-xiddig ka dib markii ay eegeen waxa aan ku habboonayn badeecada. Hadday ahaan lahayd wax aan iyaga dhibayn, way iibsan lahaayeen.
Waa nuxurka kale ee xiisaha leh ee dhaqanka iibsadaha.
Oktoobar 29, 2011 at 11:06 PM
Waad ku mahadsantahay jawaabta fekerka leh. Waa run: waxaa jira caqabad uur-ku-taal ah oo aad u baahan tahay inaad ka gudubto ka hor intaanay shisheeyaha dhab kugu qaadin. Tirinta tirada waa ku habboonaanta iyo iskuxirka suuqgeynta.
Haddana waxaan u arkaa sidaa… icky. Waxaan la yaabanahay haddii dadku sidaas ka dareemeen xayeysiinta markii taasi yaraatay? Sida oo kale, "maxaan dadka ugu sheegi lahaa sida ay waxsoosaarkayga u weyn yahay, taasi waa been?"
Oktoobar 29, 2011 at 11:20 PM
Waxaan u maleynayaa "icky" inay tahay hab fiican oo loo sharxi karo. Waxay ila tahay maalmahan inay tahay shar shar ah. Adeegyadani way qarxayaan… markaa qof ayaa adeegsanaya!
Oktoobar 30, 2011 at 8:35 AM
Magacyada adeegyada la doorbiday & qiimaha?
Oktoobar 30, 2011 at 4:55 PM
Ma ii sheegi kartaa inaan isku dayayo inaan ka fogaado taas, Kenan? Luck Nasiib wacan ayaan ku helay Socialkik iyo Retweet.it - ​​labaduba si cad ayey u soo warramaan waxayna bixiyeen taageero iyo jawaab celin.
Oktoobar 30, 2011 at 11:49 AM
Ka ganacsade ahaan iyo ganacsi ahaanba waxaan ku raacsanahay mowqifkaaga ku saabsan iibsashada waxyaabaha, aragtiyada, iyo + 1s maalgelin ahaan. Waxaa jira waxqabadyo badan oo suuqgeyn ah oo ka jira meesha aan ahayn mid dijitaal ah oo sameeya wax la mid ah. Tartanada abaalmarino, qaadashada sahanno dhiirigelin, rasiidh - kuwan dhammaantood waxay ujeeddadeedu tahay inay "iibsadaan" waqti, feejignaan, iyo hawlgal.
Laakiin halkee laynka xariiqa ah? Ficilka gadashada waxyaalaha jecel, aragtiyada, iyo + 1s wuxuu kharribi karaa kalsoonida. Macmiilkaaga fiidiyowga cajiibka ah diyaar u ah inuu si cad u sheego gobolka inay iibsadeen aragtiyaha? Waxaan tuhunsanahay inay jawaabtu tahay maya maxaa yeelay macmiilkaasi wuxuu leeyahay heer aaminaad leh oo lala dhisay saldhiga macaamiishooda hadda aysan rabin inay wax dumiyaan.
Tusaale kale: Dib u eegista Goobaha Google waxaa laga iibsan karaa bogagga sida Fiverr (http://fiverr.com/ ) ama Elance (https://www.elance.com/ ). Ma jiraan wax niyad jab leh oo leh joogitaanka internetka oo aan dib u eegis ku samayn. Anigu, macaamil ahaan, waxaan u dhaqaaqi doonaa ganacsi kale anigoo raadinaya meel aan wax ka cuno. Laakiin haddii aan arko makhaayad leh dib-u-eegis waan aqrin doonaa iyaga go'aanna waan ka gaari doonaa. Haddii aan ogaado dib-u-eegista waxaa qoray dad aan waligood isku dayin cuntada ama cagta dhigin meesha waxaan ku aamini lahaa nidaamka (in badan oo ka mid ah fikirkan http://agtoday.us/vyVjXn).
Waxa kale oo jira xagal sharci ah oo la tixgeliyo: Fiiri tilmaamaha Komishanka Ganacsiga Federaalka ee Maraykanka (FTC) ee xukuma oggolaanshaha iyo markhaatiyada (http://www.ftc.gov/opa/2009/10/endortest.shtm ). Waxaa lagu doodi karaa in iibsashada waxyaabaha la jecel yahay ay iibsaneyso ogolaansho sidaasna ay tahay in la shaaciyo. Haddii aan shaaca laga qaadin iibsadaha la midka ahi wuxuu halis ugu jiraa inuu la kulmo dacwad iyo ganaax.
Hogaamiye fikir ahaan (haa, waxaan kuu arkaa inaad tahay hogaamiye feker, waxaad ku ridi kartaa astaamahaas albaabka xafiiskaaga :), waxaa lagaa fiirinayaa inaad tahay isha aaminka ah _ ee kalsoonida iyo khibrada leh. Inaad qortay maqaalkani wuxuu naga caawinayaa inaan fahamno hoos-u-dhigga suuq-geynta, xayeysiinta, iyo xiriirka dadweynaha. Waxaan ku kalsoonahay inaadan iibsaneyn like waqtiga oo dhan :)
Xusuusin dhinac ah: ma jirtaa qaaciido joogto ah / saamiga / qalooca oo ay tahay in ganacsigu tixgeliyo marka la iibsanayo si loo helo "tiradaas muhiimka ah ee joogtada" ka dibna la joojiyo iibsashada?
Oktoobar 30, 2011 at 4:51 PM
Dadkaas halkaas jooga ee gebi ahaanba meesha ka saaraya fikradda ah iibsashada kuwa raacsan, iwm, ayaa si dabiici ah u xun, waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo isbarbardhig laga yaabo inuu beddelo maskaxdooda. Dhammaanteen kama wada baxno markii Budweiser, Coca Cola, Nike, Ford, dhammaan shirkadaha waaweyn, ay malaayiin ku bixiyaan hal xayeysiis Super Bowl ah. Xayeysiintaasi miyay "kasbatay" xuquuqda in hawada laga sii daayo, iyadoo lagu saleynayo dab-demiska warbaahinta bulshada qaarkood ee caanka ah? Maya, si fudud ayey ku iibsadeen. Xaqiiqdu waxay tahay in annaga suuqleyda ah aan wax u qabanno si aan uga caawinno macaamiisheenna, loo shaqeeyayaasha, inaan iibino waxyaabo badan.
Waxaan la kulannaa xoogaa Dr. Jekyll iyo Mr. Hyde daqiiqad kasta oo ku saabsan dhammaan arrimaha bulshada. Dhinaca kale, waxaan mararka qaarkood dooneynaa inaan ilaalino nadiifnimada khibrada bulshada, hase yeeshee indhaha kama qabaneyno marka aan adeegsaneyno wax kayar dhaqdhaqaaqyada suuqgeynta ee umuuqda inay ku xad gudbayaan ruuxa iyo ujeedka waxa warbaahinta bulshada ay muujineyso.
Waxaana u maleynayaa in asxaab badan oo naga mid ah ay wali ku xayiran yihiin fikirka ah in dhagaystayaal badan ay si uun ula macno tahay sumcad, kalsooni, iyo dhamaan waxyaabahaas oo dhan.
Oktoobar 30, 2011 at 4:53 PM
Hagaag hubaal waan ognahay in macaamiisha ay ku xayiran yihiin fikirkaas, Marty!
Oktoobar 30, 2011 at 8:19 PM
Sidee ballaaran, RTs, iyo + 1s wax u iibsigu u caawiyaan warshadaha niche? Adeegyada aad soo sheegtey ma awoodaan inay diirada saaraan koox cidhiidhi ah, waxaad dhahdaa sida xayawaannada yaryar ama xayawaanada.
Habka loogu talagalay warshadaha niche waxay noqon doonaan inay raadiyaan isticmaalka awoodda wax iibsiga ee tiro ballaadhan iyadoo la kobcinayo niche iyo dhismaha cidhiidhiga ah iyada oo loo marayo hababka kale ee warbaahinta bulshada?
Oktoobar 30, 2011 at 8:53 PM
Ma aqaano in qofna uu baarayo halka ay ka imanayaan retweets ama like, markaa ma hubo in ay muhiim tahay in bartilmaameedku yahay niche ama ballaadhan. Faa'iidada qaybta niche, waxaan u maleynayaa, in laga yaabo inaysan jiri doonin qiyaaso waaweyn sida kuwa leh mowduuc ballaadhan.